Ndị isi ụlọ ọrụ njem na-agbasi mbọ ike maka gburugburu ebe obibi na nkwado
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị isi ụlọ ọrụ njem na-agbasi mbọ ike maka gburugburu ebe obibi na nkwado
N'agbanyeghị foto a gwakọtara ọnụ, ndị isi ụlọ ọrụ na-eche na njem na-aka nke ọma n'akụkụ ndị ọzọ ma a bịa n'ibelata ikuku ikuku ikuku.
Ka ndị isi ụwa na-ezukọ na Glasgow maka COP26, ogbako mgbanwe ihu igwe nke United Nations kwa afọ, nyocha nke WTM London wepụtara taa (Monday 1 November) na-ekwusi ike na ndị isi ụlọ ọrụ njem njem na-anọgide na-agba mbọ na gburugburu ebe obibi na nkwado.
Atụmatụ COP26 nke afọ a ga-ewepụta ebumnuche mbelata maka 2030 nke ga-akwado iru ikuku carbon efu n'ime etiti narị afọ. Mba dị iche iche na ụlọ ọrụ nkeonwe ga-atụlekwa ka a ga-esi chebe obodo na ebe obibi. WTM London anọwo na mbụ na njem nlegharị anya na-adigide ruo ọtụtụ afọ ma nwee mmemme raara onwe ya nye maka njem nlegharị anya na mmemme ọ bụla kemgbe 1994.
N'afọ a, akụkọ WTM Industry Report jụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara 700 si gburugburu ụwa, yana ndị njem 1000 UK, gbasara àgwà ha maka nkwado na ókè ọ na-ekere n'ime usoro mkpebi ha.
Nzaghachi sitere n'aka ndị ọkachamara na-egosi na ụlọ ọrụ njem na-ewere ọrụ ya nke ọma, ọ bụghị nanị na gburugburu ebe obibi kamakwa na mmepeanya mmadụ. Ihe karịrị otu n'ime anọ (27%) kwuru na nkwado bụ ihe kacha mkpa, yana 43% ọzọ na-ekwu na ọ bụ na atọ kachasị elu.
Ihe dị ka otu n'ime mmadụ ise (22%) maara mkpa nkwado dị mana ha etinyeghị ya n'ọkwa atọ kachasị elu. Ihe na-erughị otu n'ime mmadụ iri (7%) kwetara na ọ bụghị akụkụ nke echiche azụmahịa ha ugbu a.
Ndị isi ụlọ ọrụ kpughekwara na ọrịa ọjọọ a akwalitela ịdịgide ihe a na-ekwu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isii n'ime iri (59%) kwuru na nkwado bụ ihe kacha mkpa n'oge ọrịa a, yana otu n'ime anọ na-agbakwụnye na ọ bụ ihe kacha mkpa tupu ntiwapụ ahụ wee nọgide na-adị otú ahụ.
N'ime afọ ndị gara aga WTM London na ndị ọrụ ya na-ahụ maka njem nlegharị anya enyerela aka n'ịhụ na mkparịta ụka gbasara njem nlegharị anya na-adigide na nke na-ahụ maka njem gafere karịa ọnọdụ mberede ihu igwe ma gụnye ohere nha anya n'ebe ọrụ, ụgwọ ọrụ dị mma na ọnọdụ, ahụike, agụmakwụkwọ, inye ụmụ agbọghọ ike, belata. ahaghị nhata na ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, WTM tọrọ ntọala Just a Drop na 1998, ọrụ ebere raara onwe ya nye iweta mmiri ọñụñụ dị ọcha na ịdị ọcha na obodo ndị nọ ná mkpa na nke nyeerela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ abụọ gburugburu ụwa.
Agbanyeghị, mmetụta njem na mbara ala na-abụkarị naanị gburugburu ikuku griin na-esi na ụgbọ elu. Ịkwụ ụgwọ carbon bụ otu usoro eji eme nke a - ndị njem na ndị na-ebubata ihe nwere ohere inye ego n'aka ndị otu ga-emefu ego ahụ na ọrụ nke ga-ewepụ ihe ndị na-esi na ụgbọ elu ha. Otú ọ dị, nkwụsị nke carbon, abụghị nke ndị nkatọ ya na ndị njem n'onwe ha, yana ụfọdụ ndị na-akwado gburugburu ebe obibi, ka na-ekwenye na ya.
Nzaghachi sitere n'aka ihe karịrị 1,000 ndị njem Britain maka akụkọ WTM Industry Report kpughere na mmadụ anọ n'ime mmadụ iri na-ekwu na ha ejirila carbon offsetting - 8% kwuru na ha kwụsịrị ụgbọ elu ọ bụla na 15% na-eme ya ọtụtụ oge, 16% ụfọdụ oge. Na otu n'ime atọ na-ajụsi ike ịkwụsị ụgbọ elu mgbe enyere ya ohere ime nke ahụ, net arụpụtaghị ihe dị mma maka nkwụsịtụ.
Agbanyeghị, 24% nke fọdụrụ zara na ha amaghịdị ihe mbelata carbon pụtara, na-atụ aro na ụlọ ọrụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ njem buru ibu kwesịrị ikwupụta echiche na omume nke iwepụ carbon n'ụzọ doro anya. Ụgbọ elu, ndị nchịkọta, ndị na-ahụ maka ịntanetị na ndị na-ere ahịa nwekwara ọrụ ha ga-arụ n'imekọrịta ndị njem.
N'ọkwa ụlọ ọrụ, e nwere ụfọdụ ndị isi ụlọ ọrụ gosipụtara enweghị mmata metụtara nkwado. Ọtụtụ ụlọ ọrụ si n'ofe ụlọ ọrụ dị iche iche edebanyela aha mgbasa ozi United Nation's Race to Zero, na-agba mbọ na ikuku carbon efu ka ọ na-erule 2050 kacha ọhụrụ.
Ndị otu World Travel and Tourism Council ga-emepe ụzọ Net Zero Roadmap ya na COP26. Ụzọ a maka ụlọ ọrụ ahụ, nke ewepụtara dị nro na mbụ na Septemba, ga-agụnye usoro nhazi maka akụkụ ụfọdụ nke njem njem na gburugburu ebe obibi njem, iji nyere aka mee ka nkwa ihu igwe ha dịkwuo elu na usoro oge mbelata ikuku.
Mana mgbe WTM London jụrụ ndị ọkachamara gbasara ma azụmahịa nke ha nwere atụmatụ “mbelata carbon” n'ebe ọ nọ, ihe karịrị otu n'ime anọ (26%) enweghị ike ikwu ma amụma dị otú ahụ dị. Ihe karịrị otu n'ime atọ (37%) kwuru na ọ nweghị amụma dị na ya.
Ndị fọdụrụ 36% kwetara na e nwere a amụma ebe, ma na 26% n'ezie mejuputa atumatu. Otu onye n'ime mmadụ iri na-eme njem kwetara na onye were ha n'ọrụ nwere amụma mbelata carbon n'ọnọdụ, nke ọ naghị eme ya.
N'agbanyeghị foto a gwakọtara ọnụ, ndị isi ụlọ ọrụ na-eche na njem na-aka nke ọma n'akụkụ ndị ọzọ ma a bịa n'ibelata ikuku ikuku ikuku. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% kwuru na njem na-eme nke ọma karịa mpaghara ndị ọzọ na naanị 21% na-eche echiche nke ọzọ. Ihe dị ka otu n'ime anọ (23%) na-ahụ mbọ njem dị ka nke a na mpaghara ndị ọzọ, ebe 18% nke nlele ahụ ejighị n'aka ka njem na-aga.
Simon Press, Onye isi ihe ngosi ngosi, WTM London, kwuru: “Ọ bụ ezie na anyị na-anya isi maka mbọ WTM gbara ọtụtụ iri afọ iji duga arụmụka gburugburu njem nlegharị anya na-adigide na nke nwere ọrụ, anyị anaghị ewe iwe. Nchọpụta ndị a na-egosi na anyị ka nwere ụzọ iji nweta ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu na ọhụụ anyị maka ọdịnihu njem nlegharị anya na-adịgide adịgide.
“Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, anyị kwesịrị tie mkpu ọbụna karị. Ihe mberede ihu igwe anaghị apụ apụ na mkpa ọ dị ịkwụsị ikpo ọkụ nke mbara ala dị oke mkpa. Mana ụlọ ọrụ njem kwesịrị ịdị na-arụsi ọrụ ike n'ịkwalite ụdịdị dị iche iche, njikọta na uru akụ na ụba ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọha na eze na-eme njem, gọọmentị na ndị na-achịkwa ka ha hụ njem na njem nlegharị anya dị ka ihe na-eme ka ọ dị mma, kama ịbụ ihe a ga-elekwasị anya na ịtụ ụtụ isi. "